ePR သည်ဥရောပ၌စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းကိုချိုးဖောက်သည် Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, သြဂုတ်လ 15, 2019 တနင်္လာနေ့, သြဂုတ်လ 19, 2019 လုကာ Budka
GDPR ကိုမေလ ၂၀၁၈ တွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ကောင်းပြီဒါကလမ်းပိုင်းပဲ။ မိုးကောင်းကင်ကမကျဘူး၊ လူတိုင်းကသူတို့တစ်နေ့တာကိုသွားကြတယ်။ အခြားသူများထက်အချို့သောပိုပြီးမပြတ်မတောက်။ အဘယ်ကြောင့်? လွတ်လပ်စွာပေးထားသောကြောင့်တိကျသော၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့်တိကျသေချာမှုမရှိသောသဘောတူညီမှုကိုကုမ္ပဏီမှအီးမေးလ်မပို့မီယခုအချိန်တွင်ဥရောပသားတစ် ဦး ထံမှလိုအပ်သည်။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ကုမ္ပဏီများ၊ HubSpots, Marketos စသည်တို့သည်အကြောင်းအရာသည်ဘုရင်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အားမပြောခဲ့သလား။
champion x10 အကြောင်းအရာကိုဖန်တီးပါ၊ ၎င်းကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ပါ၊ ၎င်းအကြောင်းဘလော့ဂ်နှင့်အလားအလာများကရှာတွေ့လိမ့်မည်။ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။ သင်၏ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်ရှိလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့ကိုအလိုအလျောက်အီးမေးလ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများဖြင့်သင်မွေးမြူနိုင်လိမ့်မည်။ ၀ ယ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ (ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကသင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိအကြောင်းအရာ၏အောက်ခြေကိုကြည့်ပါလိမ့်မည်။ ဥပမာ - လေ့လာမှု၊ သရုပ်ပြဗီဒီယိုစသည်) ။
မဟုတ်တော့တော့ - B2C ၏လောကတွင်မဟုတ်ပါ။ သူတို့ x10 champion content ကို download လုပ်ပြီး၊ သူတို့၏ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များကိုထားခဲ့သောအခါ၊ သူတို့ကပြောသော box လေးတစ်ခုကိုအမှန်ခြစ်ပေးပါ။
ငါ့ကိုရံဖန်ရံခါအရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမက်ဆေ့ခ်ျများပို့ပေးသည့်အတွက်ကျွန်ုပ် ၀ မ်းသာပါသည်။
ထို့ကြောင့် B2C စျေးကွက်အတွက်ရိုးရာအစဉ်အလာရှိသောအကြောင်းအရာ / အ ၀ င် / အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းကိုဆွဲဆောင် - ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း - နီးကပ်သောဆက်နွယ်မှုရှိသည်။
"အဲဒီဆူညံသံကဘာလဲ"B2C စျေး ၀ ယ်သူတွေကတော့သူတို့မျက်ရည်စွန်းနေတဲ့မျက်နှာတွေကရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သူတွေကိုရှာနေတာ။
ဒါဟာ B2B စျေးကွက်သမားများ၏ဆူညံသံဖြစ်သည်။
GDPR သည် B2B ၏အီးမေးလ်အရောင်းအ ၀ ယ်ကိုအနှောင့်အယှက်မပေးခဲ့ပါ။ အေးခဲသောအီးမေးလ်ဆက်သွယ်ရေးအတွက်သင့်တော်သောအခြေခံရှိကြောင်းသက်သေပြရန်ယခုသင်လိုအပ်သည်။ ခွင့်ပြုချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ဒါပေမယ့်လည်း ... အကျိုးစီးပွားဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်တတ်နိုင်သမျှ:
…သင်ကလူတွေရဲ့ဒေတာကိုအချိုးညီစွာပြသသည်၊ ပြသသည်မှာအနည်းငယ်မျှသော privacy ကိုပြသပါ။ သင်လုပ်နေသည့်အရာအားလူအများအံ့အားသင့်သွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ပြန်ကြားရေးကော်မရှင်နာရုံး စီးပွားရေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေး GDPR နှင့် PECR စည်းမျဉ်းများ
နှင့် B2B စျေးသည်များနေရောင်ထွန်းလင်းနေစဉ်မြက်ပင်ကိုဖန်ဆင်း။
ePrivacy Regulation (ePR for short) သည်လက်ရှိဥရောပ ePrivacy ဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်ကို (အီးယူအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၌နည်းနည်းလေးကွဲပြားခြားနားစွာဖြင့်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်) ကိုအစားထိုးတော့မည်ဖြစ်သည်။ PECR).
အဆိုပါ DMA ကတင်ပြခဲ့သည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ဇူလိုင်လက ePR သည် 'B2B အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်သဘောတူခွင့်ပြုချက်ရရန်' လိုအပ်လိမ့်မည်။
နောက်ထပ်စာရင်းများမရှိပါ။ ဆက်သွယ်ရန်အသေးစိတ်အတွက်လဲလှယ်စရာမလိုတော့ပါ။ နှုတ်ဆက် B2B အီးမေးလ်စျေးကွက်။ ဒါကကြီးမားတယ်
ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏အိုင်တီကဏ္inတွင်များစွာအလုပ်လုပ်သည်။ အိုင်တီချန်နယ်ကိုအခြေခံအားဖြင့်အီးမေးလ်ရိုက်ချက်များပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသည် များစွာသော B2B စက်မှုလုပ်ငန်းများဖြစ်ကြသည်။ အမှားအားလုံးအတွက်၊ ၎င်းသည်ခိုင်မြဲသော ROI ကိုကမ်းလှမ်းနေဆဲဖြစ်ပြီးကုမ္ပဏီအမြောက်အများအတွက်မူ၎င်းတို့တတ်နိုင်သည်ထင်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒီဥပဒေကိုလက်တွေ့မကျတဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့အသံနဲ့ B2B အီးမေးလ်အရောင်းအ ၀ ယ်ကောင်းကောင်းလုပ်လိမ့်မယ်လို့သင်ထင်တဲ့သူတိုင်းက ePR ကွတ်ကီးတွေအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစဉ်းစားသင့်တယ်။
ယခုနှစ်မတ်လတွင်အီးယူ၏အမြင့်ဆုံးတရားရုံး၏လွတ်လပ်သောအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်၊ သဘော ကွတ်ကီးစ်များနှင့်အခြေခံအားဖြင့်ပြောထားသည့်အချက်အလက်များအရကြိုတင်အမှန်ခြစ်ထားသည့်ကွတ်ကီးခွင့်ပြုချက်သေတ္တာသည်တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်အတွက်အခြေအနေများကိုမဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခဲ့သဖြင့်သဘောတူခွင့်ပြုချက်မှာတက်ကြွစွာမဟုတ်သလိုလွတ်လပ်စွာပေးခဲ့သည်။
pre- ကို tick cookie ကို boxer များနှင့်အတူဘယ်နှစ်ယောက်က်ဘ်ဆိုက်များသို့သွားရောက်ကြည့်ရှုသလဲ? သူတို့ထဲကအများစုဟာမှန်တယ်?
ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီများမှတစ် ဦး ချင်းစီကိုအီးမေးလ်မပို့နိုင်သည့်အနာဂတ်ကိုလက်တွေ့ကျကျရှာဖွေနေသည်။ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် (ကွတ်ကီးများမှဝင်ရောက်ခြင်း မှလွဲ၍) သင်တစ် ဦး ချင်းစီကိုခြေရာခံ။ မရပါ။ ဤပရောဖက်ပြုချက်၏ cookies element များသည်ယခုအခါယူကေတွင်ဖြစ်ပေါ်လာသည် ICO ကမရှိမဖြစ်လိုအပ်သော cookies များအတွက်သဘောတူညီမှုလိုအပ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည် သငျသညျမှန်းဆ, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမရှိမဖြစ်အမျိုးအစားထဲမှာကျရောက် (ICO က်ဘ်ဆိုက်ကိုသွား - ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုပုံမှန်အားဖြင့် * ထိတ်လန့်၏ gasps * ပိတ်ထားသည်) ။
ePR သည် GDPR နှင့်အတူထုတ်ပြန်ရန်ရှိသော်လည်းနှောင့်နှေးခဲ့သည်။ ဥရောပပါလီမန်တွင်ပြင်ဆင်မှုများကိုအတည်ပြုရန်အချိန်ယူရပြီးတရားဝင်ထုတ်ဝေသည့်နေ့ရက်မရှိသေးပါ (၂၀၂၁ မတိုင်မှီကတရားဝင်ဘလော့ဂ်များဖော်ပြသည်) သို့သော်လာမည့်အချိန်တွင်ပြင်ဆင်ရန်အချိန်အနည်းငယ်သာရတော့သည်။
သင်က ၄ င်းကို lembut သို့မဟုတ် flywheel ဟုခေါ်သည်ဖြစ်စေ, Inbound method ဟောင်းသည်ပြိုကွဲသွားသည်။
ဒါကြောင့်ငါတို့ဘာတွေလုပ်ရမလည်းဆိုတာငါတို့ရဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်မိတ်ဖက်ကိုမေးတယ် စကားလုံးအီးမေးလ်စကားပြောဆိုမှုများအတွက်စကားလုံး ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်တွင်တွေ့နိုင်သည်။ သို့သော် TL: DR: ပြုစုပျိုးထောင်မှုကိုမေ့လိုက်ပါ၊ ၀ ယ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ၊ ၀ ယ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ၊ အဆင့်မြင့်အရည်အချင်းပြည့်မီသောအလားအလာရှိသည်။
အပြုသဘောဆောင်တဲ့အချက်က SEO (မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း) ဟာရှင်သန်နေဆဲဖြစ်ပြီးကန်နေဆဲဖြစ်သည်။ အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေမှုသည်များသောအားဖြင့်ကလစ်အများစုကိုငွေပေးချေသောကြော်ငြာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည် နောက်ဆုံးပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါဒေတာ ဂူဂဲလ်က SEO ကိုမှန်ကန်အောင်လုပ်ချင်တယ်၊ အရင်ကထက်ပိုမိုလွယ်ကူအောင်လုပ်ခဲ့တယ် ကြီးစွာသောလမ်းညွှန်များ နှင့် Search Console ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်း။
သင်၏စီးပွားရေးအပေါ် ePR ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစတင်စဉ်းစားပါ။ အီးမေးလ်စျေးကွက်အပေါ်မည်မျှမှီခိုအားထားသနည်း။ သင်၏ B2B ဒေတာဘေ့စ်ဘယ်လောက်ရွေးချယ်ပြီးပြီလဲ။ သူတို့ကိုကြိုတင်ခွင့်ပြုလို့ရမလား။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အလိုအလျောက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများနှင့်အသစ်သောလူသစ်များကိုပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းထက်လက်ရှိဖောက်သည်များကိုရောင်းအားအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရန်လိုအပ်ပါသလား။ သင်၏အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေရေးပရိုဖိုင်ပေါ်တွင်တက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်နေပါသလော။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့သင်၏ site ပေါ်တွင်ခြေရာခံရန်အသုံးပြုသူများကိုသဘောတူရန်ယခုသင်ဘာလုပ်မည်နည်း။ သင်၏အခြားလိုင်းများကိုခွဲထုတ်ပြီးလျှော့ချရန်အဆင်သင့်လုပ်ပါ။ ထို့နောက် ePR ကိုမိတ်ဆက်သည့်အခါ၊ နောက်ဆုံးမည်သည့်ပုံစံဖြင့်မဆိုသင်အပိုင်းအစများကိုကောက်ယူတော့မည်မဟုတ်။
Tags: b2bကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးeprivacy စည်းမျဉ်းeuစျေးကြီးpecrprivacy စည်းမျဉ်းနည်းကျအောင်ပြုလုပ်ခြင်း
Luke Budka သည်ဒီဂျစ်တယ် PR နှင့် SEO အေဂျင်စီဖြစ်သော TopLine Comms တွင်ဒါရိုက်တာဖြစ်သည်။
Netpeak Checker - အမြစ်ဒိုမိန်းများနှင့်စာမျက်နှာများကို SEO Bulk Research